Uyilo Innovation - Ningbo Imbaleki Co., Ltd.
UKUBHALA KWI-R & D
INDAWO YOKUYILA INDUSTRIAL
Iqela loyilo loMzi mveliso livelisa imisebenzi emininzi ebalaseleyo kunye nomgangatho woyilo lobuchule minyaka le. Iqela libonelela abathengi ngothotho loyilo olusemgangathweni ophezulu lweemveliso lusebenza ngeenkqubo ezinje ngesicwangciso seprojekthi, uphando lwengcinga, uyilo lwemveliso, isisombululo, ukwenziwa kwemizi-mveliso, ukwenziwa kwemveliso, ukupakishwa kwemveliso kunye nonxibelelwano olubonakalayo. Ngeli xesha, iseke ubudlelwane bexesha elide kunye namaqela oyilo eJamani, eSweden, eHong Kong naseTaiwan ukusebenzisa rhoqo ubuchwepheshe obutsha kunye nokuyila iikhonsepthi kwiimveliso ezintsha.
IZISOMBULULO ZENKQUBO EBANZI
Ukutyelela amashishini, idatha yeNtengiso kunye nengxelo ephandayo, Imbaleki ihlala iphambi kwabathengi, kwaye ibancede baphonononge amathuba amatsha eshishini kwaye bayile iimveliso ezintsha. Siyakholelwa ukuba nokuba ikamva litshintsha njani, ukusebenza kwethu ngokukuko, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nobuchule bophando, sisikhokelo esisilandelayo, "impumelelo yabathengi" yeyona njongo yethu yokugqibela.